PressReader - Ilanga: 2018-11-26 - UBULALE INTOMBI (15) EMAGCEKENI ESONTO
UBULALE INTOMBI (15) EMAGCEKENI ESONTO
Unina uthi ubeseyidelile indodakazi yakhe
Ilanga - 2018-11-26 - Front Page - NOMFUNDO NGWANE [email protected]
IBHOKODWE ngommese yafela emjondolo osemagcekeni esonto intombazane okuthiwa ixabane nesoka layo emuva kokuba ilazise ukuthi inezinyanga ezintathu ikhulelwe.
Namanje amalungu omphakathi wasesigcemeni sakwa-A eMlazi kawawuvali umlomo ngesihluku okubulawe ngaso uNkz Babalwa Nyawose (15), obefunda u-grade 9 eMlazi Secondary.
Isidumbu sakhe sitholwe ngomakhelwane phakathi kwamabili ngoMgqibelo, singagqokile, sisembhedeni wesoka lakhe (29), sinamanxeba amathathu okugwazwa. Isoka likaNkz Nyawose beliqashe emjondolo webandla iDamaseku White Church of Apostolic in Zion, egatsheni laseKuphileni, eMlazi, okuyilapho isidumbu sitholwe khona.
Kusolakala ukuthi le ntombazane ibulawe yisoka layo ngemuva kwengxabano esuswe wukulazisa ukuthi izithwele ingane yalo. Kuthiwa isoka libhoke ngolaka, liphika isisu, kwabe sekusuka ingxabano ephethe ngokuba uNkz Nyawose atholakale esegwaziwe efile.
Kuthiwa utholwe esefile nje uNkz Nyawose, ubevele ephiliswa ngesibhaxu esinzima yisoka lakhe. Kuthiwa bekuze kukhuze omakhelwane. Kuthiwa kunesigameko lapho isoka limshaye lamshiya enezibazi ebusweni.
ILANGA lihambele kubo kaNkz Nyawose, laxoxa nonina, uNkz Thembi Nyawose oveze ukuthi indodakazi yakhe ibulawa nje, ubeseyikhuze kwaze kwafika lapho ekhathala khona, eseyidelile. Uthi ibihamba noma yinini uma isoka layo liyidinga, ubengasasho lutho, eseyibuka nje, ize ibuye uma sekuthanda yona nesoka layo.
Uthi ukwenze konke njengomzali eyishaya, ekhuluma nayo eyikhuza ngaleli soka elidala kunayo.
Uqhube wathi ibike ihambe isonto lonke iyohlala emjondolo waleli soka, kwesinye isikhathi ize ingayi ngisho esikoleni ivalelwe yilona. Uthi kayizange izibhale izivivinyo zokuphela konyaka ngenxa yalo leli soka, liyivalele endlini yalo.
“Besihleli naye imini yonke ngoMgqibelo kwaze kwashaya isikhathi sokuba siyolala. Ngizumeke elele eceleni kwami kanti kuzongena umqhafazo efonini yami obubhalwe ukuthi- please call me ngenombolo engingayazi.
“Siphaphamiswe wukungena kwawo, wawubona. Ngicabanga ukuthi bekuyinombolo yesoka lakhe. Uphume ngaleso sikhathi endlini akabange esabuya,” kusho unina.
UNkk Senzeni Zondi ongumakhelwane, okunguyena ozifikele mathupha endlini yesoka lapho kukholakala ukuthi ubulawelwe khona uNkz Nyawose, uthe bavuswe wumsindo womsolwa ngabo 1 entathakusa engqongqozela indodana yakhe, ezofuna usizo kuyona.
“Ngiphaphame ngizwa umsindo kuphahlazeka iwindi lasendlini yendodana yami, umsolwa ezocela ukuthi imfonise.
“Ngiphume ngaleso sikhathi ngamfica (umsolwa) eme ngaphandle komnyango, ebukeka ethukile. Ucele ukuba simsize simfonise. Uthe sekunomonakalo owenzeke endlini yakhe.
“Ngibe sengimlandela siya endlini yakhe, wafika wangivalela ngaphandle engafuni ukuba ngingene ngaphakathi, wacisha ugesi. Ngize ngangena ngenkani ngawukhanyisa, ngafica uBabalwa elele phezu kombhede wesoka lakhe engagqokile.
“Bengizitshela ukuthi uqulekile ngesikhathi ngingena, kwazise eceleni kombhede bekunebhakede lamanzi kubonakala ukuthi isoka lakhe belizama ukumvusa, limbhunyela ngawo ngoba nombhede ubusumanzi te,” echaza.
Uthi usondelile wathola ukuthi uBabalwa useyabanda, okukhombisa ukuthi bese kunesikhathi eside ebulewe.
“Sisola ukuthi le nto yenzeke ngabo 11 ebusuku, lo mfana wahlala naye isikhathi eside ezitshela ukuthi uqulekile,” echaza.
Kuthiwa amalungu omphakathi athukuthele agana unwabu ngemuva kokuzwa lesi sigameko, abe esengenela isoka ngesibhaxu ezama ukulibulala.
Kuthiwa kuze kwasiza ukufika kwamaphoyisa. Umsolwa kuthiwa uphuthunyiswe esibhedlela isimo sakhe sisibi kakhulu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukuboshwa komsolwa. Uthe uqashwe ngamaphoyisa esibhedlela.
ISITHOMBE: NGOSIZO LOMNDENI IZITHOMBE NGU: SABELO MASUKU
UNKZ Babalwa Nyawose (15) okusolakala ukuthi ubhokodwe yisoka lakhe ngommese lambulala ngoMgqibelo ebusuku ngemuva kokuba elitshele ukuthi ukhulelwe.
LIXOXA indaba yokwenzekile igazi elingaphandle nangaphakathi emjondolo lapho kusolwa ukuthi isoka libulale uNkz Babalwa Nyawose.